[झटारो] पौडेललाई प्रत्युुत्तर - व्यंग्य - प्रकाशितः फाल्गुन २०, २०७४ - नेपाल
[झटारो] पौडेललाई प्रत्युुत्तर
श्री रामचन्द्र पौडेलजी, तपाईंले लेखेको पत्र मेरो सचिवालयमा आएको रहेछ । तपाईंलाई थाहै छ, मलाई यो पढ्ने–लेख्ने कुरामा पटक्कै रुचि छैन । तपाईंको चिठी पढेर त्यसको जवाफ सचिवालयका भाइहरूले लेखिदिएका छन् । तपाईं त पढालु मान्छे, पढेर मनन गर्नुहोला ।
शेरबहादुर देउवाले गिनिजबुकमा नाम लेखाउन खोजेर कांग्रेस डुबायो भनेर तपाईंले मलाई बेतुकको आरोप लगाउनुभएको रहेछ । गिनिजबुकमा त तपाईंको नाम लेखिएको होला । प्रधानमन्त्री पदका लागि संसद्मा लगातार सत्रपटक चुनाव लडेर पनि नजित्ने नेता भनेर ।
जहाँसम्म मैले गुट चलाएँ भन्ने कुरा छ, गुट नचलाई राजनीति हुँदैन भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन र ? पहिले मलाई सभापति हुन नदिन मैसँग चुनाव लड्ने, अनि सबैको भइनस्, गुटको भइस् भनेर निहुँ खोज्ने ? सबैको हुनलाई त्यो बेला सर्वसम्मत अध्यक्ष दिनुपथ्र्यो नि त !
चुनावमा कांग्रेसले कांग्रेसलाई नै हराएको भन्न यत्रो वरिष्ठ नेतालाई अप्ठेरो लागेन ? कम्युनिस्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई हराएको भन्ने कसलाई थाहा छैन ? तपाईं पनि कांग्रेसै हो, तपाईंले चाहिँ ककसलाई हराउनुभयो ? तुरुन्त आत्मालोचना गर्नूस् ।
देउवाको नेतृत्वमा न पार्टी चल्यो, न त सरकार भनेर तपाईंले के बच्चा कुरा गरेको ! पार्टी सभापति म, सरकारको प्रधानमन्त्री म अनि कसको नेतृत्वमा चल्यो त ? ए बाबा, तर्क पनि अलि बौद्धिक गर्नुपर्छ नि !
‘पार्टी हारेको होइन, उम्मेदवार हारेका हुन्’ भन्ने मेरो भनाइ कसरी कुतर्क भयो ? तपाईंले चुनाव हार्नुभयो भन्दैमा कांग्रेसले हारेको हुन्छ ? सभापतिले जितेपछि पार्टीले जितेन त ?
भ्रातृ संगठनहरू लथालिंग भएको, प्रदेश अधिवेशनहरू नगराएको भनेर पनि तपाईंले मलाई दोष लगाउनुभएछ । यस्ता झिनामसिना काम पार्टीको सभापतिले गर्ने हो ? तपाईंको कामचाहिँ के त ? संगठनसम्बन्धी काम तपाईं नै गर्नोस् न, म पूरै अधिकार दिन्छु । उद्घाटन गर्ने, पदाधिकारी छान्ने बेलामा मलाई खबर गर्नुस्, आइहाल्छु । चिठी लेखेर, निहुँ खोजेर समय नाश गर्नुभन्दा काम गर्नुस् न !
सातै प्रदेशमा कांग्रेसले खुट्टा राख्ने ठाउँ भएन भनेर के भनेको ? के ओली सरकारले तपाईंलाई देशनिकाला गर्‍यो ? गर्‍यो भने भन्नुस्, म कुरा गर्छु । नत्र यस्ता हावादारी कुरा नगर्नुस् ।
सरकारले मनपरी गर्दा कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर भन्नुभएछ, सरकारमा हुँदा हामीले मनपरी गर्न हुने, उनीहरूले नहुने भन्ने के छ ? गरून् न त मनपरी । कुनै दिन हाम्रो पालो आएछ भने हामी फेरि गरौँला ।
आइजीपी काण्ड, राजदूत नियुक्ति, महाअभियोग काण्डजस्ता इतिहास भएका कुरा किन कोट्याउनुहुन्छ बारम्बार ? बितेका कुरा फर्काउन सकिन्छ ? बेकारमा टेन्सन लिने र दिने काम नगर्नोस् पौडेलजी, बिरामी परिएला !
संसदीय दलको नेता अरू कसैलाई किन दिने मैले ? यी वामहरूको के भर ! बीचैमा फ्याट्ट फुटे र सरकार चलाउने मौका आयो भने प्रधानमन्त्री हुने मै होइन ? ज्योतिषीको भविष्यवाणीलाई सार्थक नबनाइहुन्छ मैले ?
अन्तमा भन्न चाहन्छु, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री पदकै घिडघिडो हो भने कांग्रेसको छाया सरकारको प्रधानमन्त्री तपाईंलाई नै बनाइदिउँला । तर, चुनाव हारेको रिस पोखेर मेरो साँझ नबिथोल्नुहोस् । तपाईं अचेल बढी बोल्दै हुनुहुन्छ, चुप लाग्नुहोस् । जय नेपाल !